बीपी कोइराला, प्रचण्ड र नेपालको राष्ट्रियता
प्रचण्ड ले भारत को इशारामा, भारत को भुमि बाट नेपालमा गृह युद्ध गर्यो भन्ने आक्षेप लगाउने पर्याप्त नेपाली छन। ती मध्ये धेरै काँग्रेसी छन। त्यो प्रश्न को जवाफ के हो? प्रचण्ड ले भारत को इशारामा, भारत को भुमि बाट नेपालमा गृह युद्ध गरेका हुन त? प्रचण्ड को जवाफ के हो?
र त्यो प्रश्न गर्ने काँग्रेसी हरु लाई म सोध्न चाहन्छु, बीपी कोइराला ले पहिला राणा हरुका विरुद्ध र पछि शाह राजा का विरुद्ध भारत को भुमि बाट राजनीतिक क्रियाकलाप गरे त्यो कसको इशारामा गरे? भारतको इशरामा गरे?
१२ बुँदे सम्झौता जुन भयो माओवादी र सात पार्टी का बीच --- त्यो भारतले गराई दिएको हो त? त्यो १२ बुँदे जसका बिना २००६ को अप्रिल क्रांति संभव नै थिएन।
राष्ट्रियता र Racism एउटै कुरा हो भने त्यस राष्ट्रियता को कुनै बैधता बाँकी रहँदैन। अहिले नागरिकता र संघीयता को सवालमा जुन Racism देखाईंदैछ, त्यो नै यिनी हरुको "राष्ट्रियता" हो त?
bp koirala Citizenship constitution federalism India madhesi Nepal Prachanda